Kuendesa MAZANO - Shenzhen Yonwaytech Co, Ltd.
Cherekedza usati warongeka:
(1) Zvikamu zvinosanganisirwa: LED module, chiratidzo tambo pakati pemamojuru, simba tambo pakati pemodule uye magetsi.
(2) Tenga ma module ebatch imwechete: kudzivirira kupenya uye musiyano wemavara pane imwechete skrini, unofanirwa kutenga ma module ebatch imwechete. Ndokunge, iwe unofanirwa kutenga ma module echimwe chete skrini neodha imwe kubva kwatiri.
(3) Chenjedzo: Yedu akatungamira ma module haugone shandiswa sezvipenga zvezvinhu zvako zviripo zvekare zve LED. Isu usape technical technical kana sevhisi kana iwe waishandisa edu akatungamira ma module kutsiva akange aripo ekare maMODLEM.
(4) Mutero: mutengo wedu haubatanidze chero ma tariff kana mabasa pane kwairi kuenda, iwe unofanirwa kuita yekunze tsika clearance uye ubhadhare mutero kana mabasa munzvimbo.
1. Chikamu chemitengo yezvinhu hachi sanganisi mutengo wekutumira. Unogona kutarisa mutengo wekutumira pane peji yekutengera mushure mekusarudza huwandu hwechinhu uye kwainoenda.
2.DHL expression ndiyo default nzira. Vamwe vakaita seEMS, UPS, FedEX uye TNT vanozotambirwa chete kana DHL isingawanikwe kana isina kukodzera kuenda; Kana iwe uchida kutumira zvinhu negungwa kana nendege, ndapota taura nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
3. Tichaenderera mberi neodha yako mukati memazuva maviri ekushanda mushure mekugamuchira mubhadharo. Tichakuzivisa zvakare rimwe rinokurumidza zuva rekutakura kana zvinhu zvabuda muStock.
4. Isu tinongotumira kune yakasimbiswa kero yeodha. Saka kero yako inofanira kufanana nekero yekutumira. Ndokumbirawo usimbise kero yekuendesa paaccount yako kana iwe uchibhadhara neWester Union kana vamwe.
5. Kufambisa nguva yekutakura kunopihwa nemutakuri uye hakubatanidzi kupera kwevhiki nemazororo. Nguva yekufambisa inogona kusiyana, kunyanya panguva yezororo.
6. Ndokumbira utizivise kana iwe uchida kudzikisa kukosha kwechigadzirwa pane invoice yekutumira kuitira kuti udzivise kana kudzikisira mabasa etsika kudivi rako. Kana zvisiri, isu tinoshandisa iyo chaiyo mari yakabhadharwa.
7. Kana zvichidikanwa, ndokumbirawo mubatsire anotakura zvinhu kuti abatsirwe zvakanyanya maererano netsika dzinobvumidzwa kunze kwenyika.
8. Ndokumbira utarise zvinhu pamberi pembiru pavanosvika. Kana zvinhu zvakuvara, ndapota edza kutsvaga humbowo hwekuputsa, panguva iyi, titumire email nemifananidzo kana mavhidhiyo epaketi uye zvigadzirwa nekukurumidza sezvazvinogona.
9. Kana usati wagamuchira kutumira kwako mukati memazuva gumi nemashanu kubva musi wekubhadhara, ndapota taura nesu. Isu tinoteedzera iko kutumira uye todzokera kwauri ASAP.
10. Zvigadzirwa zvakarairwa hazvifarire kudzoka uye garandi kana makodhi avo abvarurwa.
11. Isu tinopa mhando yewarandi yemakore maviri kune mazhinji zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa (mazwi akasarudzika ari pasi peyekupedzisira Proforma Invoice.).Kana paine chero hurema pane zvakajairika kushandiswa panguva ino, isu tichagadzirisa kana kutsiva mahara kufekitori yedu. Vatengi vane basa rekutakura.